बैंकका प्रकार र उनीहरूका फरक प्रकारका अर्थव्यवस्था वित्त
बैंकका प्रकारहरू र तिनीहरूका बिभिन्न प्रकार्यहरू
सुसाना मारिया अर्बानो मटेओस | | बैंकिंग
आज, भित्र बैंकि sector क्षेत्र संचालन र इन्टर् कम्युनिनेट दिनका लागि असंख्य संस्थाहरूको त्यो व्यक्ति वा कम्पनीहरूले विशेष समयमा हुन सक्ने विभिन्न समस्याहरूको समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। प्रत्येक व्यक्तिको वा कम्पनीको बिभिन्न आवश्यकताहरू छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, बैंकहरूको मुद्दा बिल्कुल उस्तै हो र प्रत्येक बैंकले विभिन्न प्रकारका कार्य गर्दछ र फरक उत्पादहरू छन्। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि, हामीलाई चाहिएको बैंकको नजिक जानका लागि, हामी उनीहरूलाई १००% र सबैभन्दा माथि जान्छौं, कुन उत्पादनहरू यो प्रस्ताव गर्दछ।
बदले, प्रत्येक एक छ बिभिन्न सर्तहरू र विशेष कर्मीहरूले कस्तो प्रकारको इकाईको प्रस्ताव गर्दछ। यद्यपि स्पेन भित्र, स्पेनको बैंक सबै वित्तीय संस्थानहरु द्वारा हेर्ने जिम्मामा छ र उनीहरुको बिभिन्न अपरेशन के हुन्, यो सरकार हो जुन प्रत्येक बैंकलाई नियम र आवश्यकता दिन्छ, उत्पादनहरू जुन यी प्रत्येक बैंकले प्रस्ताव गर्दछ। यसको मतलब यो छ कि प्रत्येक बैंकहरू बिभिन्न नियमहरू द्वारा शासित छ। त्यसोभए तपाइँले बैंकहरूको विश्वको बारेमा थोरै थाहा पाउनुहुनेछ, आज हामी यसका बारेमा कुरा गर्ने छौं विभिन्न प्रकारका बैंकहरू र यसले कसरी काम गर्दछ तिनीहरू प्रत्येक।
1 स्वामित्वमा आधारित बैंकहरूको प्रकार
1.1 निजी बैंकहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
2 सार्वजनिक बैंकहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
2.1 मिश्रित बैंकहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
3 बैंकको बिभिन्न प्रकारहरूको तिनीहरूको गतिविधिमा निर्भर गर्दछ
3.1 जारी गर्ने बैंक वा केन्द्रीय बैंक, तिनीहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
3.2 वाणिज्य बैंकहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
3.3 लगानी बैंकहरू, तिनीहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
3.4 कर्पोरेट बैंकहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
3.5 उपभोक्ता बैंकहरू, तिनीहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
3.6 बचत बैंकहरू, तिनीहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
3.7 धितो बैंकहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
4 ट्रेजरी बैंकहरू
4.1 आधिकारिक क्रेडिट संस्था, तिनीहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
स्वामित्वमा आधारित बैंकहरूको प्रकार
बै of्कको वर्गीकरणमा, उनीहरूको मालिकको प्रकार धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, किनकि यसले तपाईंलाई एक वर्ग वा अर्को कोटीमा राख्दछ। बैंकहरू ज्ञात छन् कि मुख्य प्रकारहरू हुन्:
निजी बैंकहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
निजी बैंकहरू बैंकहरू हुन् जसमा समानको शेयरधारकहरू विभिन्न निजी संस्था हुन् वा ठूला लगानी भएका व्यक्तिहरू हुन्। यस प्रकारको बैंक केहि वर्ष पहिले प्रसिद्ध भयो र सबै भन्दा राम्रो उदाहरण मध्ये एक लोकप्रिय ING प्रत्यक्ष बैंक हो।
सार्वजनिक बैंकहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
जहाँसम्म सार्वजनिक बैंकहरू सम्बन्धित छन्, यस प्रकारको बैंक पूर्ण रूपमा राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ। यी बैंकहरू सबै भन्दा राम्रो परिचित छन् र सामान्यतया त्यहाँ जीवनकाल को लागी आएको छ। यस प्रकारको बैंकको एक राम्रो उदाहरण स्पेनको बैंक वा यूरोपीय केन्द्रीय बैंक हो।
मिश्रित बैंकहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
मिश्रित बैंकहरू, उनीहरूको नामले सts्केत गर्दछ कि यस्तो बैंक हो जुनसँग निजी पूंजी हुन्छ र फलस्वरूप सार्वजनिक पूंजी हुन्छ। यी प्रकारका बैंकहरू पनि राम्ररी परिचित छन् र व्यक्ति जुन सामान्यतया प्रयोग गर्छन्। स्पेनको सरकार। यो FROB को माध्यम बाट यी बैंकहरुलाई क्यापिटल इन्जेक्सन दिन्छ।
बैंकको बिभिन्न प्रकारहरूको तिनीहरूको गतिविधिमा निर्भर गर्दछ
सब भन्दा चाखलाग्दो वर्गीकरण मध्ये, त्यहाँ पनि बैंकको समारोह वा दर्शन छ। जे होस् पहिलो नजरमा, यो सबै बैंकहरू एक समान देखिन्छन्, यो मिसन हो जसले भन्यो कि बैंकको उद्देश्यहरू के हुन् र त्यसमा आधारित छ, यसको ग्राहक पोर्टफोलियो के हो। यस सूची भित्र हामी फेला पार्न सक्छौं:
जारी गर्ने बैंक वा केन्द्रीय बैंक, तिनीहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
यस प्रकारको बैंकलाई "बैंकहरूको बैंक" भनिन्छ। यहाँबाट, के प्रयास गरिएको छ यो देशको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको पर्यवेक्षण र निर्देशन गर्ने हो। यस प्रकारको बैंक मुद्राको आधारमा नीतिहरू सेट गर्ने काममा हुन्छ, देशलाई मुद्राहरू जारी गर्दै, देशको सबै भण्डारहरू उत्तम अवस्थामा राख्छ। स्पेनमा, यस इञ्चार्जको इकाई हो बैंक अफ स्पेन, जुन त्यस्तो इकाई हो जुन पूरा स्पेनी वित्तीय परिदृश्यको जिम्मेवार छ; यद्यपि वास्तवमा सबै कुराको नियन्त्रणमा रहेको इकाई युरोपियन सेन्ट्रल बैंक हो।
वाणिज्य बैंकहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
वाणिज्य बैंकहरू ती हुन् जुन उपभोक्ताको सेवामा केन्द्रित छन्। यी बैंकहरू loansण दिने, निक्षेप गर्ने, इत्यादि हुन्। यी प्रकारका बैंकहरू लगानी बैंकहरू होइनन्।
यस स्तरमा बैंकहरूको बिभाजन १ 1929 २ in मा अमेरिकाको आदेशले देखा पर्‍यो जब यो आर्थिक स collapse्कटबाट बच्न खोजिएको थियो। यद्यपि युरोपमा त्यस्तो कानून छैन जुन वित्तलाई छुट्ट्याउँदछ, धेरै बैंकहरूले यसलाई सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्छन्।
लगानी बैंकहरू, तिनीहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
लगानी बैंकहरूमा, हामी भविष्यसँग सम्बन्धित सबै उत्पादनहरू भेट्टाउँछौं। यी बैंकहरू दुबै कम्पनी र व्यक्तिहरूमा केन्द्रित छन् र यी बैंकहरू भित्र तपाईले विकल्पहरू पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै कम्पनीहरूको अधिग्रहण वा दुईको मर्जर। यहाँ, तपाईं बजारमा धितोहरूको बिक्रीको पहुँच पनि गर्न सक्नुहुनेछ र भविष्यमा राम्रो सञ्चालनहरू प्राप्त गर्न राम्रो सल्लाह प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
बैंक रिजर्व के हो?
कर्पोरेट बैंकहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
कर्पोरेट बैंकिंगमा, त्यहाँ ग्राहकहरू छन् जुन प्रायः कम्पनीहरू हुन्। यहाँ निर्दिष्ट उत्पादनहरू छन् जसले कम्पनीहरूलाई उनीहरूको गतिविधिलाई विकास गर्न मद्दत गर्छन्। यी प्रकारका उत्पादनहरू ती हुन् जुन क्रेडिटको रेखासँग सम्बन्धित छन्, प्रोमिसरी नोटहरूमा छुट, भुक्तान र चेक वा रसिदबाट आय सेवाहरूको लागि शुल्क लिन।
उपभोक्ता बैंकहरू, तिनीहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
उपभोक्ता बैंकहरूमा, त्यहाँ व्यक्तिहरू छन्। यस प्रकारका बैंकहरू हुन् जुन हामी प्रत्येक दिन हेर्छौं र जहाँ हामी व्यक्तिगत ,ण पाउन सक्छौं, हाम्रा सपनाहरूको घर किन्न धितो, क्रेडिट कार्डको लागि अनुरोध, धितो वा क्रेडिटको लागि ग्यारेन्टीहरूको प्रस्तुतीकरण आदि।
बचत बैंकहरू, तिनीहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
स्पेनमा यी बचत बैंक संस्थाहरू गैर नाफामुखी संस्था हुन्। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूको स the्कट पछि बचत बैंकहरूको लगभग कुनै चिह्न नै छैन (किनकि धेरै बैंकमा परिर्वतन भएका थिए), यी प्रकारका संस्थाहरू अस्तित्वमा थिए दुबै व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई सामाजिक कार्यको प्रस्ताव गर्न उनीहरूलाई सम्भाव्यता दिन। बचत बैंक
धितो बैंकहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
यी प्रकारका बैंकहरू धेरै लोकप्रिय हुन्छन् जब यो एक सम्पत्ति खरीद गर्नको लागि loansण दिनेको कुरा आउँछ। यो बैंक दुबै व्यक्ति र कम्पनीहरूले भाग लिएका छन्।
स्पेनमा तपाईले यस्तो प्रकारको बैंक फेला पार्न सक्नुहुन्न किनकि तिनीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै प्रख्यात छन् तर अहिलेसम्म त्यहाँ पसेनन् तर स्पेनमा त्यहाँ पहिले नै केही कम्पनीहरू छन् जुन तपाईं यस उद्देश्यका लागि जान सक्नुहुनेछ।
यी प्रकारका ट्रेजरी बैंकहरू कम्पनीहरूमा परिचित हुन्छन् र व्यक्ति-देखि व्यक्ति स्तरमा त्यति धेरै हुँदैनन्। यी बैंकहरू कम्पनीहरूलाई पूंजीगत ईन्जेक्सन दिनको लागि जिम्मेवार छन्, तिनीहरूलाई पुन: उभिन मद्दत गर्न। यस प्रकारको इकाईमा सार्वजनिक रूपमा अफिसहरू हुँदैन।
आधिकारिक क्रेडिट संस्था, तिनीहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
को आधिकारिक institutionsण संस्थानहरू ती हुन् जो स्पेनमा अपरेटिंगको जिम्मामा छन् आधिकारिक क्रेडिट संस्थान मार्फत। यस प्रकारका संस्थाहरूसँग केवल व्यापार मात्र हुन्छ जुन अर्थव्यवस्थाको मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्दछ। यस प्रकारको अस्तित्वको मुख्य उद्देश्यहरू मध्ये एक हो राष्ट्रिय स्तरमा पाइने सम्पत्ति र यसका सहि वितरणको लगभग पूर्ण सुधार गर्ने क्षमता विकास गर्नु र यसका सही वितरणको उद्देश्य हो। यस उद्देश्यका लागि यसले काम र बृद्धिका लागि मात्र होइन तर त्यहाँको पर्यटन बृद्धि गर्न सबै प्रकारको आर्थिक र सांस्कृतिक गतिविधि बढाउने प्रयास गर्दछ।
आईसीओ छ यस प्रकारको परियोजना समर्थन गर्ने प्रभारी स्पेनमा वरपरका कम्पनीहरूमा पूँजी इंजेक्स गर्न। यी कम्पनीहरू एक अर्कामा अधिक प्रतिस्पर्धी हुन र समग्रमा देशको प्रगतिमा योगदान दिनको लागि तिनीहरूले त्यसो गर्छन्।
थप रूपमा, यो प्लेटफर्मले कम्पनीहरूलाई आर्थिक नीतिका कार्यक्रमहरू मार्फत सहयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दछ जब प्राकृतिक प्रकोप वा आर्थिक संकटको समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्।
यस पोस्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कि हामीले सोचे जस्तो कुनै बैंकमा सम्पर्क राख्नु त्यति सजिलो छैन किनकि त्यस बैंकले हामीलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्यो र सबै भन्दा माथि हामीले जान्नै पर्छ, ताकि हामी व्यक्तिगत रूपमा कुन कुरामा भाग लिन सक्नेछौं। हामी प्राप्त गर्न चाहन्छौं।
प्रत्येक बैंकहरूले उत्पादनमा मापदण्ड स्थापित गरेका छन् जुन तपाईं प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ, तथापि, अवसरमा र केही ग्राहकहरूलाई जित्नको लागि, तिनीहरूले उत्पादनहरू दिन्छन् जुन तिनीहरू १००% योग्य छैनन्। जहाँसम्म बैंक अफ स्पेनले यी सबै प्रकारका चीजहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्दछ, यो महत्त्व जुन हामीलाई पनि सूचित गरिएको छ कि प्रत्येक प्रकारको बैंकले हामीलाई के प्रस्ताव गर्न सक्दछ र कुन उद्देश्यका लागि यसले हाम्रा सबै व्यवसायहरू र अनुरोधहरू भित्र राख्दछ, अझ सुरक्षित छ।
तैपनि, उत्तम विकल्प भनेको हाम्रो विश्वस्त बैंकलाई सम्पर्क गर्नु र हामी के प्राप्त गर्न चाहन्छौं भनेर बताउनु हो, सामान्यतया, एउटै बैंक भित्र यसको विभिन्न शाखाहरू हुन्छन् र प्रत्येक बैंकमा त्यहाँ प्रायः पेशेवरहरू हुन्छन् ताकि हामी यसलाई गर्न सक्दछौं। कुनै प्रकारको श doubts्का भन्दा पहिले उहाँ कहाँ जानुहोस्।
संसारमा कति पैसा छ
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » बैंकिंग » बैंकका प्रकारहरू र तिनीहरूका बिभिन्न प्रकार्यहरू
१% भन्दा बढी उत्पादनको साथ जम्मा
मास्टर गर्न क्रेडिट